osTicket: ny rafitry ny tapakila tsara indrindra Open Source | Avy amin'ny Linux
Niasa tamina orinasa roa lehibe tany Venezoelà zanako aho, roa, ny sampana mpanohana dia nanana fahasahiranana betsaka rehefa nitantana ny olana ara-teknikan'ireo mpampiasa, voavaha tamin'ny fampiasana teknolojia isan-karazany izy ireo, saingy ambonin'izany rehetra izany miaraka amin'ny fampiharana a Open Source Ticket System.
Na dia tsy manam-pahaizana amin'ny sehatry ny fanohanana aza aho indraindray dia voatery nametraka tanana be tamin'izany faritra izany tao amin'ny iray amin'ireo voalaza etsy ambony ireo orinasa, toy izany koa, nanana ny fahafahan'ny mpampiasa GLPI aho ka nisafidy ny hampihatra osTicket, ilay ho ahy no tsara indrindra Open Source Ticket System.
Misafidy ny hampihatra osTicket Ao amin'ny orinasa iray amin'ny faritra fitahirizana kaontenera, tsy maintsy nandinika fitaovana isan-karazany aho izay niavaka ireto manaraka ireto: RT (Request Tracker), OTRS: Rafitra fangatahana tapakila misokatra, GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informático) y osTicket.
Niara-nijanona tamin'ireto farany aho, indrindra satria namela ahy handeha ho azy ny fandefasana tapakila araka ny filazan'ny sampana tompon'andraikitra tamin'ny famahana izany (Ary amin'izany fomba itantanantsika ny fanohanan'ny faritra rehetra, tsy ny faritra teknolojia ihany). Toy izany koa no nataoko izay hahazoana antoka fa tsy misy fanamboarana izany, satria mpampiasa iray ihany no afaka mandray ny tapakila tsirairay.
Zava-dehibe ny manamarika izany osTicket Izy io dia manana fampiasa ilaina mba hitantanana karazana fanohanana. Ankoatry ny maha loharano misokatra azy dia manana vondrom-piarahamonina marobe mamela azy hanolotra endri-javatra bebe kokoa sy tsara kokoa noho ireo mpifaninana aminy.
1 Inona no atao hoe Open Source Ticket System?
2 Inona no atao hoe osTicket?
3 Endri-javatra OsTicket
4 Ahoana ny fametrahana osTicket
4.1 fepetra takiana
Inona no atao hoe Open Source Ticket System?
ny Open Source Ticket System na ny hoe amin'ny Espaniôla dia fantatra hoe Open Source Ticket System, Fampiharana maimaimpoana izy ireo ahafahantsika mitantana tranga sy fangatahana serivisy amin'ny fomba voarindra sy mandeha ho azy.
Ny trangan-javatra sy ny fangatahana dia azo avy amin'ny tapakila alefan'ny mpampiasa, izay tehirizina sy atolotra amin'ny fomba maro samihafa amin'ny mpandraharaha misahana ny fitantanana azy. Ireo fitaovana ireo dia be mpampiasa amin'ny Call Center, IT Departemanta, Data Center, Orinasa telemarketing, sns.
Inona no atao hoe osTicket?
Izy io dia fitaovana web izay ahafahanao mitantana amin'ny fomba mangarahara, mora sy tsotra, tranga noforonin'ireo mpampiasa tamin'ny alàlan'ny mailaka, endrika tranonkala ary antso an-tarobia.
osTicket edia heverin'ny maro ho tsara indrindra Open Source Ticket System androany, satria manana fiasa sy fitaovana maro hafa noho ny ankamaroan'ny rafitra tapakila eny an-tsena.
Toy izany koa, ny fametrahana osTicket dia tsotra ary ny fampiasana azy dia miavaka ambonin'ny vahaolana hafa. Ho fanampin'izay, manana API mahery izy io izay mamela ny fampidirana ilay fitaovana amin'ny vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo.
Fitantanana fitsipiky ny orinasa mampiasa SLA
Mamela ny fanivanana ny tapakila arakaraka ny sampan-draharaha mifanandrify aminy hamahana azy.
Manampy amin'ny fametrahana ny dalam-piasa arakaraka ny karazana tapakila izany, ary mamaly valiny mandeha ho azy raha ilaina.
Azo atao ny mampiditra fampirimana haino aman-jery (sary, sary, feo ary horonan-tsary) amin'ireo fangatahana isan-karazany.
Azonao atao ny manoratra amin'ny tapakila momba ny hetsika rehetra natao tamin'ilay lohahevitra resahina.
Fisamborana tapakila amin'ny alàlan'ny mailaka, tranonkala, telefaona, fax ary amin'ny alàlan'ny API.
Sehatra manokana ao anaty tapakila, ahafahan'ny mpampiasa mangataka fampahalalana marina.
HTML lahatsoratra manankarena
Ny fampidirana ireo lohahevitra fanampiana mba hamahana ireo tranga tsy mila manokatra tapakila dia ahafahana mamorona sokajy ao anaty tapakila ihany koa.
Sakano ireo mpiara-miasa marobe hamaly tapakila miaraka amin'izay.
Mamindra tapakila eo anelanelan'ny departemanta na manolora azy ireo ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mba hahazoana antoka fa izy ireo dia mandray an-tanana ny mpiasa marina.
Ny fangatahana rehetra dia apetraka amin'ny Internet. Ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny ID sy tapakila ID, na dia tsy mila fisoratana anarana na mpampiasa aza handefa tapakila.
Tatitra feno izay manome topy maso ny fahombiazan'ny ekipa mpanohana.
Ahoana ny fametrahana osTicket
Ny in-2 nametrahako osTicket dia narahiko ny fomba ofisialy izay ao amin'ireo fitoeram-bokiny, izay asehoko etsy ambany, tsy mila miresaka momba ny Requirements sy ny extension sasany izay atoro ahy hametraka.
Ny mpizara HTTP dia mihazakazaka, indrindra Apache
PHP kinova 5.4 na avo kokoa, soso-kevitra 5.6
fanitarana MySQL ho an'ny PHP
MySQL database base 5.0 na avo kokoa
gd, gettext, imap, json, mbstring, ary extension xml ho an'ny PHP
Ny module APC dia afaka ary namboarina ho an'ny PHP
Ny fomba tsotra indrindra hametrahana osTicket dia ny fandefasana ny tahiry ho an'ny daholobe, avy eo mamorona fampirimana iray amin'ny mpizara tranonkala anay ary farany mampita ilay fampiharana. Araka ny asehon'ireto manaraka ireto:
Azonao atao ny miditra amin'ny oagina mpiorina server anao hametraka sy hanamboatra ny rindranasa, arak'izay takiana. Azonao atao ihany koa ny mahazo fanavaozam-baovao ary aparitaho (avy amin'ny fampirimana nanaovan-tsarimihetsika ny toerana anaovana azy), amin'ny fanatanterahana ireto baiko manaraka ireto
Ny fampiharana dia misy ihany koa ho an'ny fametrahana amin'ny fitaovana malaza Softaculous.
Manoro hevitra mafy an'ity rindranasa ity aho ary raha mila mitantana tranga mety kokoa ianao, azo antoka fa hanampy anao haingana sy mora ity fitaovana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » osTicket: ny rafitry ny tapakila tsara indrindra
Luis urban dia hoy izy:
Mihevitra ve ianao fa safidy tsara sy miaraka amin'ny tombony mitovy amin'ny rafitra toa ny Remedy AR?
Mamaly an'i Luis urban
Safidy tsara amin'ny BMC Remedy Help Desk izy io, manana ny ankamaroan'ny fiasa omen'ny Remedy AR ho an'ireo tanjona manokana ireo, saingy ambonin'izany rehetra izany dia maimaim-poana izy io.
Lahatsoratra tena tsara sy tolo-kevitra tsara
Misaotra betsaka noho ny hevitrao
Rodo dia hoy izy:
Salama androngo, lahatsoratra tsara re izany!
Manana fanontaniana aho; Fampiharana inona no mety ahafahan'ny osTicket hamenoana CMDB araka ny zavatra niainanao?
Mamaly an'i Rodo
Tsy nila nila nametraka CMDB aho, raha sendra mila izany aho dia mety handray ny lalana haingana ary hampiasa OTRS https://www.otrs.com/ izay efa mampiditra ny CMDB amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ... Ankehitriny, raha ampidirina amin'ny osticket izy io, dia hampiasa ny afo mahery aho hiaraha-miasa amin'i Itop izay CMDB misokatra sy matanjaka, Itop dia tsy mahalala azy tanteraka (mpivady fametrahana test) fa ny sasany amin'ireo mpiara-miasa amiko dia nampiasa azy io tamin'ny famokarana ary niresaka mahatalanjona momba izany.
kaido dia hoy izy:
Miara-miasa amin'i Itop aho amin'izao fotoana izao, atoroko an-jambany izy io satria tena feno ary matanjaka be fa noho ny olana isan'andro dia tsy nanararaotra an'io fitaovana io izahay fa azo antoka fa manome safidy betsaka anao ity fotoana hampiharana CMDB matanjaka.
Mamaly an'i kaido
David gruzzi dia hoy izy:
Izaho sy ny namako dia manana fanontaniana, manana boky torolàlana na horonan-tsary na zavatra hafa ahafahako mifototra amin'ny fikirakirana 0 ka hatramin'ny 100 ao anatiny
Valiny tamin'i David Gruzzi
Ny osticket dia mila fanovana kaody vitsivitsy saingy mila mampihatra CMDB izy ireo, na izany aza, ao an-tsaina fa ny firenena latina dia tsy manaraka tsara ny fenitra amin'ny tetika sasany, ampiharinao izany ary ho tsara lavitra noho ny OTRS ... izay hitako fa tsy maintsy ampihariko ny fitaovana tsara ny amin'ity volana desambra 2020 ity .. satria be ny lahatsoratra tsy manjavozavo toa ity iray ity izay nilazan'izy ireo fotsiny fa tsara fa mora izany fa tsy misy parameterization .. fa raha tsy misy an'io dia tsy dia mahafinaritra toa ny tena izy
Fanontaniana iray, misy plugin na kaody sasany ampiharina, ka rehefa manome ny tapakila ho an'ny mpikambana mpanohana 1 dia mandefa mailaka ho an'ilay olona namorona ny tapakila, miaraka amin'ny nomeraon'ny tapakila sy ny anaran'ilay olona hanatrika azy io. . Cheers ..
Famerenana tsara, eny tompoko, misaotra tamin'ny fanoloranao hevitra.
Lahatsoratra tsara, misy tolo-kevitra momba ny mandeha ho azy tapakila mampiasa rakitra CSV?
Valio i Gino
Alejandra Gonzalez dia hoy izy:
Tafandria mandry! Ahoana no fomba ahazoako ny fampandrenesana amin'ny mailaka any amin'ny departemanta misahana ny famahana ny tapakila fotsiny fa tsy amin'ny agents rehetra
Valiny tamin'i Alejandra González
Diego Villasis sary placeholder dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara sy tolo-kevitra tsara, azonao atao ny manome soso-kevitra OSTicket ho an'ny fanambarana izay TSY avy amin'ny IT, fa avy amin'ny orinasa, toy ny fangatahana kalitaon'ny vokatra, fitakiana faktiora, sns.
Afaka namboarina tamin'ny saha misy azy ve ny takelaka fitakiana?
Manana App hiasa amin'ny finday finday Android / IOS ve ianao?
Miala tsiny amin'ny zavatra maro miaraka amin'izay, manantena aho fa handray ny hevitrao marina
Valiny tamin'i Diego Villasis
mvalenzuela dia hoy izy:
Ny GLPI dia tena feno, mamela anao handefa mailaka ary hifandray amin'i LDAP
Mamaly an'i mvalenzuela
systemickets dia hoy izy:
Osticket dia safidy tena tsara ho an'ny fanohanan'ny mpanjifa, nampiasako izany nandritra ny fotoana ela tao amin'ny orinasa niasako. Izany no antony ananako an'io ao anatin'ny lisitry ny rafitra tapakila loharano malalaka ampiasaina. https://helpdeskpymes.com/herramientas-de-ticketing/
Mamaly amin'ny sistematickets
Juan Carlos Herrera Blandon dia hoy izy:
Ry namako, manao ahoana ianao, amin'ity programa ity dia afaka mamorona rafitra firaketana ??? Ahoana no anaovan'ny GLPI azy ???
Nohel Guardiola dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, votoaty tena tsara, fanontaniana iray monja no tadiaviko momba ny rafitra fiasa izay omenao soso-kevitra ny hametraka OSticket
Valiny tamin'i Nohel Guardiola
salama, misy manam-pahaizana osTicket ve eto sa olona atolonao azy?
Mamaly an'i alejandro diaz
CONSULTANT ENGLER dia hoy izy:
Olá Prezado, consultant Engler aho, miasa amin'ny fivarotana trano lazer feno, misy any BARUERI, OSASCO, CARAPICUIBA, GUARULHOS ARY SÃO BERNARDO DO CAMPO, vidiny sy fepetra tena tsara (Manomboka amin'ny 209,00) Aceita FGTS, Venha Conhecer o voaravaka (efitrano fandraisam-bahiny 01 sy 02) eo anelanelan'ny contact zap 11 98495-1050, hahafantarana antsipiriany sy fitsidihana na voaravaka att, (Engler Consultant)
Valio amin'ny CONGIER ENGLER
Ahoana ny fampiasana iTunes amin'ny Linux